दसैँ कसरी मनाउँदै छन् खेलाडी ? |
दसैँ कसरी मनाउँदै छन् खेलाडी ?
प्रकाशित मिति :2015-10-13 14:33:34
आमासँग बसेर रमाइलो गर्छु : मिरा राई, म्याराथन धावक
मेरो घर पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको सानो दुम्मा गाविसमा छ । मैले अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न देशमा आयोजना भएका म्याराथन प्रतियोगितामा भाग लिई विश्व कीर्तिमान राखी नेपाल कै शिर उच्च राख्न सफल भएकी छु जस्तो लाग्छ । विगतका दसैँ विभिन्न कारणले घरपरिवारसँग मनाउन नपाएकोले यसपाली जसरी पनि भोजपुरको सानोदुम्मास्थित आफ्नो घर जाने योजना रहेको छ । आमासँग बसेर गफ गर्ने रमाइलो गर्ने हो । दसैँ पर्व दिनानुदिन रमाइलो चाडपर्व भन्दा पनि देखासिखी चाड हुँदै गएकोले अलि दु:ख लाग्छ । हामी नेपालीको महान चाड दसैँले दशा ननिम्त्याओस, सबैले आफ्नो योग्यता र क्षमताले धान्न सक्ने गरी पर्व मनाऔं । यसलाई वर्षदिनको रमाईलो पर्वको रुपमा मनाऔं । यसपाली त विगतको वर्षको तुलनामा दसैँको छुट्टै रौनक थपिएको र फरक छ । संविधान सहितको दसैँ मनाउन पाइएको छ । धेरै वर्ष हामीले संविधान विनाको दसैँ मनाउन बाध्य भयौं । तर, यो वर्ष त हामीसँग संविधान पनि छ त्यसैले छुट्टै रमाइलो लागिरहेको छ । नेपाल साझा फुलबारी भएकोले हामीले एकअर्काको अर्थात सबै जात, धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ । नजिकै आईरहेको दसैँको सम्पुर्ण नेपालीलाई शुभकामना दिन चाहान्छु ।
यसपालीको दशैं परिवारसँग: चन्द्रबदना राई, महिला भलिबलकी अन्र्तराष्ट्रिय रेफ्रि
यसपालीको दसैँमा खेल पर्ने नपर्ने टुंगाे लागिसकेको छैन । राष्ट्रिय चाड भएकोले प्रायजसो दसैँमा पर्ने गरी कुनै पनि प्रतियोगिता कमै पर्ने हुन्छ । म १२ वर्ष नेपालको भलिबल राष्ट्रिय खेलाडीको रुपमा खेलिसकेकी खेलेँ हाल अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीको रुपमा कार्यरत छु । यसपालीको दसैँमा घर परिवारसँग बसेर मनाउने तयारी गरिरहेकी छु । कतिपय क्लबहरूले चाडपर्वको अवसर पारेर पनि प्रतियोगिता गराउने हुनाले दसैँलगायत अन्य चाडपर्वमा पनि घरपरिवारसँग बस्न नपाएको अनुभव छ । त्यत्तिबेला कस्तो खल्लो भएको थियो । यसपाली पनि एउटा क्लबले बोलाएको छ । तर, तय नभईसकेकोले के हुन्छ टुङ्गो भएको छैन । मेरो चैं भोजपुर माईती खोटाँ घर हो । तर, हाल म अनामनगरमा परिवारसँगै बस्दै आएकी छु । चाडपर्वमा घरपरिवारसँगै बसेर मनाउन मन लागेपनि आफूले रोजेको कर्मक्षेत्र फरक भएकाले हिँड्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । कहिलेकाँही चाडपर्वका बेला प्रतियोगिताका कारण घरपरिवार टाढा पनि बस्नुपरेको छ ।
चाड पर्वमा खेल हुँदैन : माया लामा, महिला फुटबल रेफ्रि
खासमा दसैँ हिन्दु धर्मावलम्बीको भनिन्छ । हामी बुद्ध धर्म मान्छौं, टिका चैं रातो हैन हामी सेतो लगाउँछौं ।’ प्रायजसो एन्फाले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताहरू नेपाली चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै आयोजना गर्ने हुँदा कुनै पनि प्रतियोगिता चाडपर्वमा पर्दैन । कम्तिमा दुई वा तिन दिन चाँहि परिवारसँग बसेर मनाउन पाईन्छ, त्यसपछि त फेरि खेलमा नै फोकस हुनुपर्छ ।’ म ललितपुरको भैँसेपाटी निवासी हो । म पहिला त कराँते खेलाडी थिएँ । यसैबीच फिफाका प्रशिक्षक मिजेन्द्र मिश्रले फुटबल खेल्न सुझाएपछि फुटबल खेल्न थालेको र एकवर्ष खेलेपछि फेरि रेफ्रिमा पनि पद खाली भएपछि तालिम लिएँ रेफ्री भएँ । यसपालीको दसैँमा अहिलेको देशको परिस्थितिले पनि प्रभाव पारेको छ । यसपालीको दसैँ अघिको प्रतियोगिता सकिएको र अब टिकाको तीन दिनपछि लमजुङमा आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा जाने योजना छ । एन्फाले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय लिग यसपाली नभएकोले विगत भन्दा यसपालीको दसैँमा अलि सहज भएको छ ।
तेलका कारण घर जान नपाइने भयो :रोशनी राई, जुडो प्रशिक्षक ईलाम
हाल म तालिम लिन काठमाडौं आएकी छु । दसैँमा घर जाने योजना रहेपनि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण डिजेल, पेट्रोलको समस्याले जान पाइन्छ कि पाईन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । यसपालीको दशैँ सँधैको जस्तो नहोला कि भन्ने लागिरहेको छ, हेरौँ के हुन्छ । दशैंपछि सातौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनौटको लागि जसरी पनि ईलाम जानुपर्ने बाध्यता रहेपनि देशको परिस्थितिले अन्यौलमा परेकी छु । कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । १० वर्ष खेलाडी भई प्रतियोगितामा खेलँहाल ६ वर्षदेखि प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । चाडवाडमा २\_३ दिन मात्रै विदा पाईन्छ । ।समाजमा बसिसकेपछि धर्म सँस्कृति अनुसार मनाईने चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै जुनसुकै प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्न जरुरी हुन्छ । खेलाडीले पनि आफ्नो धर्म सँस्कृति अनुसार चाडपर्व आफ्नो घरपरिवारसँग मनाउन पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
टिका नलगाएपनि रमाइलो गर्छौ : झरना गुरुङ, उसु खेलाडी पोखरा
म यतिखेर त काठमाडौंमा प्रशिक्षणमा व्यस्त छु । मेरो घर पोखरा हो र मेरो गृह जिल्लामा हुने सातौं राष्ट्रिय छनौट प्रतियोगिताको लागि पोखरा जाने तयारीमा छु । म ८ वर्षदेखि उसु खेलमा सक्रिय खेलाडीको रुपमा रहेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बंगलादेश, भियतनाम, चीनलगायतका देशहरूमा भएको प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपालको लागि पुरस्कार पाएकी छु । हाम्रो गुरुङ समुदायले दसैँमा टिका नलगाउने तर, आफन्तजन भेला भई भोज र खाने रमाईलो गर्ने चलन रहेको छ । समुदायको चलन अनुुसार र आफू बौद्ध धर्मावलम्बी भएकाले दसैँमा टिका, जमरा लगाउने संस्कार नभएपनि आफन्तसँग भोज खाने चलन अनुुसार यसपाली पनि यस्तै जमघटमा सहभागी भई रमाईलो गर्ने योजना रहेको छ । यसपाली पनि सँधै झैँ आफन्त, साथीहरूसँग भेटेर रमाइलो गर्ने हो । तर, हामी मार्सल आर्टका खेलाडीहरूले आफनो वजनमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले मनपरे पनि खानामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जथाभावी खान पाईन्न ।
यसपाली त्यति उल्लास छैन : पवित्रा याक्थुम्बा, रोयल नेपाल गल्फ क्याप्टेन
म विगत ९ वर्षदेखि गल्फ खेल्दै आएकी छु । अहिले म रोयल नेपाल गल्फ क्याप्टेन छु । हामी दसैँमा सेतो टिका लाउछौं । यस वर्षको दसैँ पछिल्लो वर्षको जस्तो रमाईलो लागेको छैन । मैले अहिलेसम्म प्रतियोगिताका कारण दसैँमा घर भन्दा बाहिर जान परेको छैन । हामीले दसैँ बोनान्जा भनेर १ दिने म्याच खेल्छौं । यसपाली पनि दसैँ अघि खेल्ने योजना छ, दसैँ मनाउनलाई नै असर पर्ने गरी म्याच आयोजना गर्दैनौ । मैले दसैँ पर्वलाई रमाईलो, आफन्तसँग भेटघाट गर्ने चाडको रुपमा लिने गरेकी छु । हामी नेपालीहरू सँस्कृतिको धनी भएकाले खुशी साथै गर्व पनि लाग्छ । दशैं भन्ने बित्तिकै एककिसिमको उल्लास हुने गरेपनि यसपाली देशको अवस्थाले मनमा उल्लास नै छैन । अरुको देखासिकी नगरी आफ्नो स्तरले भ्याए जत्ति र सक्ने किसिमले रमाईलो गर्न गरौं । वर्षदिनको पर्वलार्ई सबै दुःख भुलाएर रमाइलो गर्न र भड्किलो नबनाउन हामी सबै संस्कृति प्रेमीहरूको कर्तव्य हो त्यसैले हामी कर्तव्यनिष्ठ हौं ।
टिका लगाउन नपाएपनि रमाइलो गर्ने हो :रुबिना क्षेत्री, महिला क्रिकेट क्याप्टेन
मेरो घर झापा हो । म नेपाली महिला क्रिकेटमा आवद्ध भएको पनि १० वर्ष भयो । हाल म नेपाल महिला क्रिकेट टिमको क्याप्टेन भएको ४ वर्ष भयो । अहिले म झापाको धुलाबारीस्थित आफ्नै एकेडेमीमा व्यस्त छु । हाम्रो यसपाली जुठो परेका कारण दसैँमा टिका लगाउन नहुने भएकोले सामान्य भेटघाट गर्ने अनि साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने योजनामा छ । मलाई दसैँ भन्ने बित्तिकै आफन्तजनसँग भेटघाट गर्ने, मिठो मिठो खाने, रमाईलो गर्ने जस्तो लाग्छ र यसपाली पनि एक्साइटेड छु । रमाईलो गर्ने हो । यो १० वर्षको खेल जीवनमा प्रतियोगिताको कारण ३ पटक नेपाल बाहिर रहेर दसैँ मनाएकी छु । घरदेखि टाढा रहेर दसैँ मनाउँदा घरपरिवारलाई एकदमै सम्झेकी छु । घर बाहिर दसैँको समयमा पर्दा एकदमै खल्लो लाग्यो । तर, हामीलाई हाम्रो म्यानेजरले फोनबाट घरमा कुरा गर्न दिनुभयो र टिका लगाएर दक्षिणा पनि दिनुभयो । यसले गर्दा घरकोे खल्लोपना अलिअलि भएपनि मेटिएको थियो । यो चाड वर्षदिनमा एकपल्ट आउने पर्व भएकोले रमाईलो गरी मनाऔं ।
प्रकाशित मिति:२०७२ असाेज २६ गते मंगलवार